Ungalala kanjani noma umise okwesikhashana usebenzisa imiyalo ku-terminal | Kusuka kuLinux
Ungalala kanjani noma umise okwesikhashana usebenzisa imiyalo ku-terminal
Ukusuka esigungwini ungenza konke, kulokhu ngizokhombisa ukuthi ungazi kanjani ukuthi ngabe ikhompyutha yakho iyakweseka ukungena kwimodi yokulala noma yokulala ubusika, nokuthi ikwazi kanjani ukukwenza.
Ukwazi ukuthi ngabe ikhompyutha yakho ingakwazi ukumisa isikhashana kanye / noma ukulala ubusuku bonke, kufanele sifunde okukufayela le / sys / power / state
Uma u- "mem" evela emiphumeleni, kusho ukuthi singayimisa ikhompyutha. Uma "idiski" livela kusho ukuthi singalala.
Kokubili ukumisa kanye nokuzilazisa sidinga amalungelo okuphatha, ngakho-ke kufanele senze imiyalo njengezimpande noma ngeSudo.
1 Hambela phansi:
2 Indawo Yasebusika:
3 Ukulala ne-Hibernate ngasikhathi sinye:
Ukumisa okwesikhashana sizosebenzisa i-pm-suspend
Ukulala ubusika sizosebenzisa i-pm-hibernate
Ukulala ne-Hibernate ngasikhathi sinye:
Uma ikhompyutha yakho isekela zombili, okungukuthi, ukumisa okwesikhashana nokulala ubusika, ungasebenzisa i-hybrid yakho kokubili.
Lokhu kuvumela ini?
Lokhu ukumiswa okufana nomyalo wokuqala engikukhombise wona, kepha ngaphezu kokumiswa okwesikhashana, isithombe sesistimu siyasindiswa, okungukuthi, ukumisa + ukubamba ubusika.
Ake ngichaze kangcono, uma ushiya ilaptop umisiwe futhi ushiywe ngebhethri elingu-0% lapho uqala ilaptop, uhlelo luzoqala lube mhlophe, ngenkathi ngalo myalo ngomqondo, lumisa uhlelo kepha uma siphelelwa amandla lapho ukuqala i-laptop ngeke silahlekelwe yilutho, ngoba isithombe esigcinwe lapho simiswa sizosetshenziswa + ubusika
Ngiyethemba ukuthi ukuthole kuthakazelisa.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » Ungalala kanjani noma umise okwesikhashana usebenzisa imiyalo ku-terminal
Ngithola «mem disk» 😀
Ngemuva kwalokho ungamisa okwesikhashana bese ulala ubusika
URicardo Parraga kusho
Ake sibone ohlelweni lwami:
impande @ debian: ~ # ikati / sys / amandla / izwe
nqabela mem disk
impande @ debian: ~ # pm-
pm-hibernate pm-is-supported pm-powersave pm-suspend pm-ukumisa-i-hybrid
Kuhlelo lwami engikusebenzisayo uhlelo 'lwe-hibernate', ngokwazi ukuthi selivele linamathuluzi.
Phendula uRicardo Parraga
@ iseva elibamba: ~ $ cat / sys / power / state
Kuhle kakhulu, ngakho-ke manje ngizosebenzisa iSudo pm-suspend-hybrid, ukuphepha okwengeziwe, Mayelana
Sandy, yenza isibuyekezo seposi .. ..inemibhalo eminingi ephindaphindwayo .. ayizinzile ..
Silungile, ngiyabonga kakhulu. Angazi ukuthi ikhanda lami likuphi kamuva nje… ^ - ^ U
Kade ngisebenzisa le miyalo isikhathi eside, ngaphezu kwe-init 0, poweroff noma ukuvala shaqa -h manje ngoba ngezizathu ezingaziwa i-gnome ithatha umzuzu ukuphendula kule miyalo
Ngiyabonga ngokwabelana ngethiphu, ngivele ngakubona futhi ngakhumbula ukuthi bengifuna isikhathi eside, manje ngidinga nje ukuthola ukuthi ngingakopisha kanjani ibhodi lokunamathisela ngekhonsoli.
Siyabonga ngomnikelo nangebhulogi enhle 😉
Akukho lutho, injabulo.
Mayelana nebhodi lokunamathisela, hlola lapha uma kukhona okuthile okukusebenzelayo: https://blog.desdelinux.net/tag/clipboard/
Ngicabanga ukuthi babefake i-athikili lapha kulokho, uma nje i-xclip ikusiza ukuthi usuke kukhonsoli uye kuzinhlelo zokusebenza, ku-debian kusekhoselweni.
Ngiyabonga kakhulu, ikhompyutha yami iyahambelana ukumisa isikhashana nokulala ubusuku bonke, ngisebenzisa i-Kubuntu 14.04 (64) futhi sengivele ngiyifakile ukwenza le nqubo.
ikati / sys / amandla / izwe
futhi ngikwazile ukwenza izivivinyo eziboniswe kule ndatshana, kepha ngine-password enikwe amandla ukuqala uhlelo nangemuva kokubuya ekumisweni nasekuhosheni usebenzisa i-Terminal ngemiyalo:
Sudo pm, uhlelo luqala lapho lwalukhona ngaphandle kokungicela i-password, futhi lokho kuyaxaka ngoba uma ngimisa ngendlela ejwayelekile ngisebenzisa i-graphical interface, lapho ngibuya ekumisweni ihlala ingibuza iphasiwedi.
Ngiyabonga ngemiyalo, kepha ngibuya kanjani ebuthongweni noma ebusika? I-laptop yami isele nesikrini esimnyama nokuqhubekayo, futhi akukho engikucindezelayo okungibuyisela ohlelweni, ngakho-ke kufanele ngiyiphoqe.
Ngibhale umyalo wekati / sys / amandla / izwe
Ngithole okulandelayo: freeze mem disk
ukuthayipha Sudo pm-suspend kumisa i-pc
ukuthayipha i-Sudo pm-hibernate kuvala isikrini okwesekhondi bese kubuyela kokujwayelekile. Ngaphambi kokuba no-Ubuntu 14.04 ngibe ne-Windows 8.1 futhi bengikwazi ukufihla ikhompyutha, ucabanga ukuthi iyini inkinga yami?
Kwenzeka okufanayo nakimi. Ngokwale ndatshana kufanele ikwazi ukulala ubuthongo kodwa angazi ukuthi kungani ingasebenzi.
Ngisebenzisa Ubuntu 14.04, kepha ngine-Windows kule PC. Isahlukaniso se-Ubuntu siyi-4GB ext20 kanti i-SWAP ingu-6,0GB, ilingana nosayizi we-RAM (kusuka kulokho ebengikuqonda ukufihla ukuthi i-SWAP iyasetshenziswa). Angazi ukuthi ukwahlukanisa okukhudlwana kuyadingeka yini noma ngabe ngiphuthelwa enye into. Ngiyethemba ukuthi othile angangisiza.
Ngiyabonga, okokufundisa kwakho kungisizile kakhulu, ngintsha endaweni yeLinux futhi ngayo ngifuna ukuxhaphaza engingakwenzanga kuWindows. Ukubuka nje, futhi ngibuyele kanjani ekulawuleni ithanga lami?
uuups, sengivele ngibona kumazwana ukuthi singasilulama kanjani isimo sethanga, ngiyabonga kakhulu
Ikhompyutha yami ephathekayo isekela izinketho eziningi, sengivele ngizizamile kukhonsoli nakho konke. Kulungile, umbuzo wami uthi, ngizifaka kanjani lezi zinketho eGnome? Njengoba isistimu inginikeza kuphela inketho yokuCisha nokuVimba, eyokugcina icisha i-monitor bese ikhiya iseshini, kepha ihlala ivuliwe.
Ngifuna ukuthi imiswe lapho kuvalwa isembozo se-laptop ukuze ngiyinyakazise kahle, kepha anginazo lezo zinketho, enkethweni yamandla ibonakala ikhubazekile.
kungitshela eceleni kwediski mem
Ngiyabonga kakhulu ngokwabelana ngalokhu, ngiphonse i- "freeze standby mem disk", amanye amagama amabili azobalulekile noma yini?
UJesu Hernandez Garcia kusho
Uyazi ukuthi ikhona yini indlela engingacima ngayo isikrini? Bengilokhu ngisebenzisa i-xset kepha isikrini sihlala simnyama futhi asicimi ngokuphelele .. Kungaba ukuvala isikrini kusuka kuselula nge-raspberry pi2 nge-ssh .. Ngiyabonga kakhulu futhi siyakuhalalisela ngalesi sifundo 🙂
Phendula uJesús Hernández García
Ngingayisusa kanjani inketho yokulala ubusika bonke. Njengoba ngiyisebenzisa, ibhethri lihlala kancane kakhulu. Ngikusho lokhu ... kuyasiza !!!
Siyabonga nge-usemoslinux yokufundisa.
Ngiyabonga, kusebenze ngokuphelele! Masisebenzise i-Linux Ubuntu
Osvaldo Delgado placeholder image kusho
Madoda, ngiyaxolisa ngiyizamile kepha ayingisebenzelanga ngenguqulo 16.04. Sanibonani futhi ngiyabonga kakhulu
Phendula u-Osvaldo Delgado
I-Arista, WinFF, Curlew neShazam: Izinguquko zevidiyo zeGNU / Linux